Shabaab oo dhaqdhaqaaq ciidan ka wada Buurhakaba
Warar madax banaan oo aan ka heleyno degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa shegaya in Al Shabaab oo isaga baxay deegaankaasi shalay ilaa maanta ay dib ugu soo laabteen degmadaasi.
Sawir guud hadii aan idinka siino degmada, waxaa lagu arakaa Saraakiisha iyo ciidamada Shabaab oo wada hubeysan oo ku jira diyaar garow kaasi oo aan la ogeyn in dagaal isugu diyaarinayaan inay uga baxayaan magaalada marka xaaladu isbadasho.
Dad deegaanka ayaa muujinaya dareen cabsi leh oo isweydiinaya waxa dhici doona iyaga oo ka baqdin qaba in lagu duldagaalamo hadii ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay gaaraan Buurhakaba.
Saraakiisha ciidamada Shabaab oo muxaadarooyin ka jeediyay masjiyada ku yaalla Buurhakaba iyo fagarayaasha kale ee halkaasi ayaa uga digay dadka hadii magaalada ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo AMISOM in aysan aysan ku kicin falalka aysan raaliga ka aheyn.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku baxay wadada ka baxda Sh/hoose ee aada buurhakaba waxa ay ku sugan yihiin Baridoogle halkaasi oo hada wararka qaar ay sheegayaan in qorshahooda uu yahay inay ka dhaqaaqaan.